Wasiir Goodax: Xafiis ayaan ka fureynaa Kismaayo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay iney Kismaayo ka furaneysa xafiis dadka deegaanka u fududeeya howlaha ay uga baahan yihiin xukuumadda, iyagoo ka maarmaya iney Muqdisho u safraan.
Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya, Cabdullaahi Goodax Barre wasiirrada dowladda ee ka qayb-galaya shirka dib u heshiisiinta Jubbooyinka ayaa sheegay in wasaaraddiisu ay xafiis ka furanayso magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose.
“Xafiiska cusub ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalku dhawaan ka furaneyso magaalada Kismaayo, wuxuu shacabka deegaanada u sahli doonaa wixii howl ama adeeg uga baahdaan dowladda, waxeyna uga maarmi doonaan Muqdisho u soo safraan” ayuu yiri wasiir C/llaahi Goodax Barre.
Wuxuu sheegay wasiirku in 13-ruux oo howl-wadeenno oo khibrad leh ay ka howlgeli doonaan xafiiska cusub ee Kismaayo. Goodax ayaa xusay in xafiisyo nucaas ah wasaaraddu ka furan doonto gobollada Jubbada Dhexe iyo Gedo.
Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaan wax howl ha ka qaban magaalada Kismaayo, halkaasoo uu maamulko hogamiye Axmed Madoobe oo markii hore gobolkaas kazoo galay dhanka Kenya, iyadoo ay garab siinayaan ciidamada dalkaas.